မောင်လေးတွေနဲ့တွဲတော့မယ်ဆိုရင် ဒါတွေသိထားဖို့လိုပါတယ်!! - For her Myanmar
အခုတလော မမ ဝေဒနာတွေ ပြန်ပြီး ကူးစက်ပျံ့နှံ့နေတယ်ဆိုသလားလို့… ယောင်းတို့ကို လာကြွေပြတဲ့ မောင်လေးတွေလည်း မနည်းဘူးဟုတ်? အမယ်.. မလျှိုကြေးနော်.. သိပြီးသား 😛
အဲဒီလို လာကြွေတဲ့ထဲကမှ တချို့ကောင်လေးတွေနဲ့ အကြည့်ချင်းဆုံ၊ ရင်ခုန်နေမိပြီလား? သူ့ရဲ့ ရွှတ်နောက်နောက် အပြောအဆိုကြားထဲ သာယာနေမိပြီလား? အချွဲတုံးလေးကြောင့် အရည်တွေ ပျော်နေရပြီလား?
တကယ်လို့များ ယောင်းတို့အနေနဲ့ ဒီလိုမျိုး ကိုယ့်ကို ရင်ခုန်အောင် ပြုစားနိုင်တဲ့ မောင်လေးနဲ့ ရွှေလက်တွဲမယ်လို့ စိတ်ကူးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ သိထားသင့်တာလေးတွေရှိတယ်နော်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အရွယ်ချင်းမတူတော့ နားလည်မှုတွေယူရမှာတွေ ညှိယူရမှာတွေရှိတယ်လေ။
၁။ အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ ဝေဖန်မှု
မိန်းကလေးတစ်ယောက်က ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ တွဲတော့မယ်ဆိုရင် သူ့ဘက် ကိုယ့်ဘက် အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ဝေဖန်မှုကို အနည်းနဲ့အများတော့ ကြုံရမှာပါ။ ကိုယ့်မိဘတွေကို မိတ်ဆက်ပေးရင်တောင် မိဘတွေက အဆင်ပြေပါ့မလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ် ရှိမှာအမှန်ပါပဲ။ ကိုယ့်ချစ်သူက အသက်ငယ်ပေမဲ့ အရည်အချင်းရှိသူဖြစ်ဖို့တော့ လိုတာပေါ့နော်… ကိုယ့်တာတော့ လုံမှ ဖြစ်မယ်လေ နော့်…
၂။ ကောင်လေးက ကိုယ့်ရဲ့အရည်အချင်းတွေကို ရှိန်နေမလား။
ကောင်လေးတွေက မမတွေကို ချစ်တယ်ဆိုတာ အထင်ကြီးလေးစားစိတ်လည်း ပါတယ်လေ။ ကောင်မလေးငယ်ငယ်လေးတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် မမတွေက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အားကိုးနိုင်တယ်။ ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ မမက မောင်လေးထက် ပိုအောင်မြင်နေတဲ့အခါ မောင်လေးတွေဘက်က သိမ်ငယ်စိတ်ဝင်လာတာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ စတွဲစမှာ မသိသာပေမယ့် ရေရှည်မှာတော့ ဒီအချက်က အချစ်ခရီးလမ်းမှာ အဖုအထစ်ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
ပွဲအကြောင်း အသေးစိတ် သိလိုပါက >> http://bit.ly/2WK7oFQ
၃။ မောင်လေးတွေနဲ့ ဒိတ်ရင် ပျော်ရမှာပါ။
မောင်လေးတွေက အသက်ငယ်တော့ ဘဝအတွေ့အကြုံလည်း မစုံသေးဘူး။ ပြောရရင် ဘဝကို မျှော်လင့်ချက်တွေအများကြီးထားတတ်၊ အကောင်းမြင်စိတ်တွေရှိတတ်သူတွေပါ။ အရာရာကိုအကောင်းမြင်ပြီး နေ့ရက်တိုင်းကို ပျော်ပျော်ဖြတ်သန်းချင်ကြသူတွေမို့ သူတို့နားမှာနေရတဲ့အခါ ကိုယ်ပါပျော်ရွှင်လာရပါတယ်။ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အခိုက်အတန့်တွေကိုလည်း နှစ်ဦးသားအတူဖန်တီးဖြစ်လာပါတယ်။
Related Article >>> Relationshipတစ်ခုကိုတည်ဆောက်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ခါနီး ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်မေးသင့်တဲ့မေးခွန်းများ
၄။ ဘဝအတွေ့အကြုံ နဲ့ ရင့်ကျက်မှုကွာဟခြင်းက အဆင်ပြေပါ့မလား။
မောင်လေးတွေ ဘဝအတွေ့အကြုံနည်းတာ၊ မရင့်ကျက်တာဟာ အချစ်ခရီးလမ်းမှာ တစ်ခါမက ပြဿနာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ငယ်ရွယ်သူတွေမို့ အလေးအနက်ထားသင့်တာကို အလေးအနက် မထားတတ်တဲ့အခါ အတွေ့အကြုံတွေအရ အရာရာကို အလေးအနက်ထား စိုးရိမ်ပူပန်တတ်တဲ့မမတွေနဲ့ ပဋိပက္ခ ဖြစ်တော့တာပေါ့။
ဒါပေမဲ့ အသက်အရွယ်ကြီးတိုင်း ပိုရင့်ကျက်တယ်၊ အသက်ငယ်ရင် ကလေးဆန်တယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ အမြဲတော့မမှန်ပါဘူး။ လူတွေရဲ့ ရင့်ကျက်မှုဟာ သူတို့ကြီးပြင်းနေထိုင်ရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လည်း အများကြီးသက်ဆိုင်တာမို့ အရွယ်ငယ်ပေမဲ့ ရင့်ကျက်နေသူတွေ၊ အသက်အရွယ်ကြီးပေမဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့ ရင့်ကျက်မှုနည်းသူတွေ ရှိတတ်ပါသေးတယ်။ နားလည်မှုက အဓိက လိုတာပေါ့ ယောင်းတို့ရေ…
၅။ ဘေးစကားတွေ နားမယောင်ပါနဲ့။ မောင်လေးတွေနဲ့လည်း အတည်တွဲလို့ရပါတယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့် မောင်လေးတွေဟာ ဘဝကိုလေးနက်မှုမရှိဘူး၊ အိမ်ထောင်တွေ ဘာတွေပြုဖို့အထိ စဉ်းစားချင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ အတွေးက အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ မှန်ကန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အပေါ်က နံပါတ် ၄ အချက်မှာပြောခဲ့သလို အသက်ငယ်ပေမဲ့ ဘဝကို လေးလေးနက်နက် တွေးခေါ် ဖြတ်သန်းနေတဲ့သူတွေလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။
ဒါကြောင့် မောင်လေးနဲ့လည်း တွဲချင်တယ်။ အသက်အရွယ်ငယ်သူနဲ့ တွဲလို့ အတည်တကျမဖြစ်မှာ ကြောက်တယ်လို့ စိုးရိမ်မိနေပြီဆိုရင် သူ အသက်ငယ်ခြင်း မငယ်ခြင်းထက် သူက အလေးအနက်ထားတတ်သူလား ဆိုတာကို လေ့လာကြည့်ပါ။
Related Article >>> အပျိုကြီး မမ Vs အိမ်ထောင်ရှင် မမ
၆။ အသက်ဘယ်လောက်ကွာတာလဲဆိုတာကလည်း ထည့်စဉ်းစားသင့်တဲ့အရာပါ။
အတည်တကျ တွဲကြပြီဆိုတဲ့အခါ နောက်ထပ်ကြုံရနိုင်တဲ့ အချက်တစ်ခုလည်း ရှိပါသေးတယ်။ သူရော ကိုယ်ရောက အသက်အရွယ်အလိုက် ဖြတ်သန်းလာရတဲ့ ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကွာတဲ့အချိန်မှာ နှစ်နှစ်၊ သုံးနှစ်ကွာတာက ပြဿနာသိပ်မရှိဘဲ ငါးနှစ်နဲ့အထက် ကွာလာပြီဆိုရင်တော့ ကိစ္စတစ်ခုကို ရှုမြင်ပုံချင်း၊ ချဉ်းကပ်ပုံချင်းက ကွာခြားလာပါတော့တယ်။
ဒီအခါမှာ ဘဝရဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေ၊ ပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်တဲ့အခါ မကျေမလည်ဖြစ်ရတာတွေ ကြုံလာနိုင်ပါတယ်။
အက်ဒ်မင့်အနေနဲ့ ယောင်းတို့ကို ထပ်အကြံပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ အသက်ငယ်တာကြီးတာထက် သူဟာ အရည်အချင်းရှိသူလား၊ အလေးအနက်ထားတတ်သူလား၊ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို တန်ဖိုးထားတတ်သူလား၊ ကြင်ကြင်နာနာဆက်ဆံတတ်သူလား ဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပဲ ကိုယ်နဲ့လက်တွဲရမယ့်သူကို ရွေးချယ်စေချင်ပါတယ်။
ယောင်းတို့တွေ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူနဲ့ ရွှေလက်တွဲနိုင်ကြပါစေ။
Sugar Cane ( For Her Myanmar )
မတျမတျတို့ သိဘို့ 😛
အခုတလော မမ ဝဒေနာတှေ ပွနျပွီး ကူးစကျပြံ့နှံ့နတေယျဆိုသလားလို့… ယောငျးတို့ကို လာကွှပွေတဲ့ မောငျလေးတှလေညျး မနညျးဘူးဟုတျ? အမယျ.. မလြှိုကွေးနျော.. သိပွီးသား 😛
အဲဒီလို လာကွှတေဲ့ထဲကမှ တခြို့ကောငျလေးတှနေဲ့ အကွညျ့ခငျြးဆုံ၊ ရငျခုနျနမေိပွီလား? သူ့ရဲ့ ရှတျနောကျနောကျ အပွောအဆိုကွားထဲ သာယာနမေိပွီလား? အခြှဲတုံးလေးကွောငျ့ အရညျတှေ ပြျောနရေပွီလား?
တကယျလို့မြား ယောငျးတို့အနနေဲ့ ဒီလိုမြိုး ကိုယျ့ကို ရငျခုနျအောငျ ပွုစားနိုငျတဲ့ မောငျလေးနဲ့ ရှလေကျတှဲမယျလို့ စိတျကူးရှိတယျဆိုရငျတော့ သိထားသငျ့တာလေးတှရှေိတယျနျော။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ အရှယျခငျြးမတူတော့ နားလညျမှုတှယေူရမှာတှေ ညှိယူရမှာတှရှေိတယျလေ။
၁။ အသိုငျးအဝိုငျးရဲ့ ဝဖေနျမှု
မိနျးကလေးတဈယောကျက ကိုယျ့ထကျငယျတဲ့ ကောငျလေးတဈယောကျနဲ့ တှဲတော့မယျဆိုရငျ သူ့ဘကျ ကိုယျ့ဘကျ အသိုငျးအဝိုငျးနဲ့ ပတျဝနျးကငျြရဲ့ ဝဖေနျမှုကို အနညျးနဲ့အမြားတော့ ကွုံရမှာပါ။ ကိုယျ့မိဘတှကေို မိတျဆကျပေးရငျတောငျ မိဘတှကေ အဆငျပွပေါ့မလားဆိုတဲ့ စိုးရိမျစိတျ ရှိမှာအမှနျပါပဲ။ ကိုယျ့ခဈြသူက အသကျငယျပမေဲ့ အရညျအခငျြးရှိသူဖွဈဖို့တော့ လိုတာပေါ့နျော… ကိုယျ့တာတော့ လုံမှ ဖွဈမယျလေ နေျာ့…
၂။ ကောငျလေးက ကိုယျ့ရဲ့အရညျအခငျြးတှကေို ရှိနျနမေလား။
ကောငျလေးတှကေ မမတှကေို ခဈြတယျဆိုတာ အထငျကွီးလေးစားစိတျလညျး ပါတယျလေ။ ကောငျမလေးငယျငယျလေးတှနေဲ့ ယှဉျရငျ မမတှကေ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ အားကိုးနိုငျတယျ။ ယုံကွညျမှုအပွညျ့ရှိတယျ။ ဒါပမေဲ့ မမက မောငျလေးထကျ ပိုအောငျမွငျနတေဲ့အခါ မောငျလေးတှဘေကျက သိမျငယျစိတျဝငျလာတာ ဖွဈတတျပါတယျ။ စတှဲစမှာ မသိသာပမေယျ့ ရရှေညျမှာတော့ ဒီအခကျြက အခဈြခရီးလမျးမှာ အဖုအထဈဖွဈလာတတျပါတယျ။
၃။ မောငျလေးတှနေဲ့ ဒိတျရငျ ပြျောရမှာပါ။
မောငျလေးတှကေ အသကျငယျတော့ ဘဝအတှအေ့ကွုံလညျး မစုံသေးဘူး။ ပွောရရငျ ဘဝကို မြှျောလငျ့ခကျြတှအေမြားကွီးထားတတျ၊ အကောငျးမွငျစိတျတှရှေိတတျသူတှပေါ။ အရာရာကိုအကောငျးမွငျပွီး နရေ့ကျတိုငျးကို ပြျောပြျောဖွတျသနျးခငျြကွသူတှမေို့ သူတို့နားမှာနရေတဲ့အခါ ကိုယျပါပြျောရှငျလာရပါတယျ။ ပြျောစရာကောငျးတဲ့ အခိုကျအတနျ့တှကေိုလညျး နှဈဦးသားအတူဖနျတီးဖွဈလာပါတယျ။
Related Article >>> Relationshipတဈခုကိုတညျဆောကျမယျလို့ ဆုံးဖွတျခါနီး ကိုယျ့ကိုကိုယျပွနျမေးသငျ့တဲ့မေးခှနျးမြား
၄။ ဘဝအတှအေ့ကွုံ နဲ့ ရငျ့ကကျြမှုကှာဟခွငျးက အဆငျပွပေါ့မလား။
မောငျလေးတှေ ဘဝအတှအေ့ကွုံနညျးတာ၊ မရငျ့ကကျြတာဟာ အခဈြခရီးလမျးမှာ တဈခါမက ပွဿနာဖွဈနိုငျပါတယျ။ ငယျရှယျသူတှမေို့ အလေးအနကျထားသငျ့တာကို အလေးအနကျ မထားတတျတဲ့အခါ အတှအေ့ကွုံတှအေရ အရာရာကို အလေးအနကျထား စိုးရိမျပူပနျတတျတဲ့မမတှနေဲ့ ပဋိပက်ခ ဖွဈတော့တာပေါ့။
ဒါပမေဲ့ အသကျအရှယျကွီးတိုငျး ပိုရငျ့ကကျြတယျ၊ အသကျငယျရငျ ကလေးဆနျတယျဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ အမွဲတော့မမှနျပါဘူး။ လူတှရေဲ့ ရငျ့ကကျြမှုဟာ သူတို့ကွီးပွငျးနထေိုငျရတဲ့ ပတျဝနျးကငျြနဲ့လညျး အမြားကွီးသကျဆိုငျတာမို့ အရှယျငယျပမေဲ့ ရငျ့ကကျြနသေူတှေ၊ အသကျအရှယျကွီးပမေဲ့ အတှအေ့ကွုံနဲ့ ရငျ့ကကျြမှုနညျးသူတှေ ရှိတတျပါသေးတယျ။ နားလညျမှုက အဓိက လိုတာပေါ့ ယောငျးတို့ရေ…
၅။ ဘေးစကားတှေ နားမယောငျပါနဲ့။ မောငျလေးတှနေဲ့လညျး အတညျတှဲလို့ရပါတယျ။
ယဘေုယအြားဖွငျ့ မောငျလေးတှဟော ဘဝကိုလေးနကျမှုမရှိဘူး၊ အိမျထောငျတှေ ဘာတှပွေုဖို့အထိ စဉျးစားခငျြမှာမဟုတျဘူးဆိုတဲ့ အတှေးက အတိုငျးအတာတဈခုအထိ မှနျကနျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အပျေါက နံပါတျ ၄ အခကျြမှာပွောခဲ့သလို အသကျငယျပမေဲ့ ဘဝကို လေးလေးနကျနကျ တှေးချေါ ဖွတျသနျးနတေဲ့သူတှလေညျး ရှိနပေါသေးတယျ။
ဒါကွောငျ့ မောငျလေးနဲ့လညျး တှဲခငျြတယျ။ အသကျအရှယျငယျသူနဲ့ တှဲလို့ အတညျတကမြဖွဈမှာ ကွောကျတယျလို့ စိုးရိမျမိနပွေီဆိုရငျ သူ အသကျငယျခွငျး မငယျခွငျးထကျ သူက အလေးအနကျထားတတျသူလား ဆိုတာကို လလေ့ာကွညျ့ပါ။
Related Article >>> အပြိုကွီး မမ Vs အိမျထောငျရှငျ မမ
၆။ အသကျဘယျလောကျကှာတာလဲဆိုတာကလညျး ထညျ့စဉျးစားသငျ့တဲ့အရာပါ။
အတညျတကြ တှဲကွပွီဆိုတဲ့အခါ နောကျထပျကွုံရနိုငျတဲ့ အခကျြတဈခုလညျး ရှိပါသေးတယျ။ သူရော ကိုယျရောက အသကျအရှယျအလိုကျ ဖွတျသနျးလာရတဲ့ ဘဝအတှအေ့ကွုံတှကှောတဲ့အခြိနျမှာ နှဈနှဈ၊ သုံးနှဈကှာတာက ပွဿနာသိပျမရှိဘဲ ငါးနှဈနဲ့အထကျ ကှာလာပွီဆိုရငျတော့ ကိစ်စတဈခုကို ရှုမွငျပုံခငျြး၊ ခဉျြးကပျပုံခငျြးက ကှာခွားလာပါတော့တယျ။
ဒီအခါမှာ ဘဝရဲ့ စိနျချေါမှုတှေ၊ ပွဿနာတှကေိုရငျဆိုငျတဲ့အခါ မကမြေလညျဖွဈရတာတှေ ကွုံလာနိုငျပါတယျ။
အကျဒျမငျ့အနနေဲ့ ယောငျးတို့ကို ထပျအကွံပေးရမယျဆိုရငျတော့ အသကျငယျတာကွီးတာထကျ သူဟာ အရညျအခငျြးရှိသူလား၊ အလေးအနကျထားတတျသူလား၊ မိနျးကလေးတဈယောကျကို တနျဖိုးထားတတျသူလား၊ ကွငျကွငျနာနာဆကျဆံတတျသူလား ဆိုတဲ့အခကျြတှနေဲ့ပဲ ကိုယျနဲ့လကျတှဲရမယျ့သူကို ရှေးခယျြစခေငျြပါတယျ။
ယောငျးတို့တှေ ကိုယျခဈြရတဲ့သူနဲ့ ရှလေကျတှဲနိုငျကွပါစေ။
Tags: facts, love, Ma Ma, Maung Lay, Notice, Relationship
သုံးဖူးသမျှ skincare တွေထဲမှာ တစ်ခါမှ ဒီလောက်ထိ သဘောကျတာမျိုး မရှိဖူးဘူး
Sugar Cane March 15, 2018